Isevisi ye-OEM - Xuzhou Roc International Trading Co., Ltd.
Isipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-25 sikhiqiza amakhasimende wephaneli we-OEM.
Kusukela lapho, iqembu lethu lezinkuni ze-OEM lamazwe emazweni angaphezu kwama-50 kuwo wonke amazwekazi amahlanu.
Ama-oda we-OEM / ODM ayamukelwa. Sinezinzuzo ezinkulu ku-R & D, inkambiso eyenziwe ngemikhiqizo yebhodi yezinkuni ikakhulukazi ebhodini le-plywood ne-melamine.
Ngeminyaka eminingi yokuhlangenwe nakho kokusebenzisana namakhasimende ethu avela emhlabeni wonke, sibhekwa njengophathina wecebo onokwethenjelwa ngenxa yezinga lesipiliyoni nobungoti obunikezwa ekuthuthukiseni, ekwakhiweni nasekusekeleni ezentengiselwano kwemikhiqizo yabo.
Ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo yephaneli lezinkuni ze-ROC OEM ingahlala ibamba umkhuba wemfashini futhi ihambe phambili kwabanye izimbangi. Sisungule i-R & D Center enonjiniyela abangaba ngu-12 abakha futhi bathuthukise iphaneli yezinkuni, abazimisele ukunikeza insizakalo engcono kumakhasimende ethu futhi bathuthukise ukuncintisana kwethu. Sizibophezele ekusizeni amaklayenti ethu ukuthi athuthukise isithombe somkhiqizo wawo, athuthukise inani lomkhiqizo, futhi anciphise intuthuko ye-LT, anciphise izindleko zokukhiqiza. Singanikeza ngesevisi eyodwa ye-OEM / ODM. Eminyakeni engu-5 edlule, iqembu elikhulu lenze impumelelo enkulu. Amacala amaningi amukelwa amakhasimende futhi abasiza ukuthi babambe isheya lemakethe elingaphezulu.
Sinezethu ku-plywood factory / OSB factory / MDF factory kanye ne-LVL factory factory, Tooling Factory ukuhlangabezana nokukhiqizwa kwe-OEM okudingekayo. Okukhishwa kwenyanga kuze kufike ku-70000CBM (i-PLYWOOD, i-OSB ne-MDF njll).
Sinezinqubo eziqinile zangaphakathi zokulawulwa kwekhwalithi ekuhlolweni okungenayo kwempahla eluhlaza, ukuhlolwa kokukhiqizwa nokukhiqizwa kwangaphambi kokuthunyelwa. Lokhu kwenzelwa ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo yethu ingahlangabezana ne-spec edingekayo yekhasimende futhi imikhiqizo yakho ye-OEM ithembeke kakhulu ngekhwalithi. Ifektri yethu idlule i-ISO9001 futhi imikhiqizo yethu ithole izitifiketi ze-CE, FSC, JAS-ANZ, PEFC, BS njll. Sikholelwa kuphela ngekhwalithi enhle lapho-ke singazuza ukwethenjwa kumakhasimende ethu.
Ngeminyaka yokuthumela isipiliyoni, singakwazi ukusingatha inqubo yesimemezelo samasiko ngokushelela futhi ngesikhathi esifanele ukuhlela ukuthuthwa kwasendaweni ukuqinisekisa ngesikhathi sokulethwa kokuthunyelwa kwekhasimende lethu. Sonke sikholelwa ukuthi insiza enhle kakhulu iyinto yokungenisa kakhulu ukunqoba ukwethenjwa kumakhasimende ethu kulezi zinsuku.
Qala ibhizinisi lakho elisha nge-plywood yekhwalithi, i-OSB ne-MDF. Masenze imikhiqizo yakho ye-OEM / ODM futhi sikhuthaze ibhizinisi lakho. Sicela uthinte i-ROCPLEX manje.
Inqubo ye-OEM / ODM
Iyini inqubo ye-ROCPLEX panel panel OEM / ODM?
Ukwenza ngokwezifiso ukukhanya
Ukwenza ngokwezifiso kwe-R & D
1. Ukuhlaziywa kwesidingo
Njengesinyathelo sokuqala sentuthuko, ithimba lethu lokukhiqiza lizimisele ukubandakanya ekuhlaziyweni kwezidingo. Kwamanye amaklayenti anomqondo ongaqondakali, njengephaneli lezinkuni elisetshenziswa esitolo noma elisetshenziswa esizeni sokwakha, sizohlela ithimba lethu lobunjiniyela, iqembu lezokumaketha ukuze banikeze izeluleko zabo zobungcweti ukuze baqiniseke ukuthi umkhiqizo uhlangabezana nokulindela kwemakethe.
Kulesi sinyathelo, senza uhlu lohlamvu olufunayo lwaleli phaneli lakho lokhuni.
2. Ukubuyekezwa Kwezobuchwepheshe
Ngohlu olunzima lomlingiswa oyifunayo, ithimba lethu lokukhiqiza, kanye nomnyango wokuthenga, lixhumana nabathengisi bezinto zethu, ukwenza ishidi lokumiswa elinemininingwane lezinto.
Kulesi sigaba, singahle sibuyele esigabeni sokuqala ngenxa yokuthi kungenzeka noma kube nenkinga yokulungisa izindleko.
3. Izindleko noHlelo
Ngokuya ngocwaningo lwangaphambilini, i-ROCPLEX ingahlinzeka ngefomu lokushaja nohlelo, olwehluka kakhulu ezinhlamvwini ezifunwayo, ubungako namandla okuthengwa kwempahla.
Kulesi sigaba, singasayina inkontileka esemthethweni.
4. Ukuthuthukiswa kweSampula
I-ROCPLEX izokwenza isampula, njengoba ibizwa ngokuthi isampula lobunjiniyela, elicubungula zonke izinhlamvu ezenzelwe. Lesi sampula lapho-ke sikhonjelwe ekubiliseni ukuhlolwa, ukuhlolwa kokuqina, ukuhlolwa kwamandla nokuhlolwa kokuqina.
Sikhuthaza iklayenti ukuthi lihlanganyele entuthukweni ukuhlinzeka ngempendulo esheshayo.
5. Ukuhlolwa kwe-Test
Ngesampula lobunjiniyela elinelisekile, singadlulela esigabeni sesivivinyo-sokukhiqiza. sihlola ubungozi obungaba khona ngokungaguquguquki kokukhiqizwa okukhulu, ukuthembeka komhlinzeki kanye nohlelo olukhulu lokukhiqiza.
6. Umkhiqizo Omkhulu
Njengoba zonke izinkinga zixazululiwe futhi kutholakala ubungozi, singena esigabeni sokugcina somkhiqizo omkhulu.